Eedaymaha Loo Jeedinayo Dawladda Madaxweyne Geelle Oo Isasoo Taraya Iyo Mas’uuliyiin Ku Baaqay In 24-saacadood Gudahood Dalka Lagaga Saaro Wakiilka Jabuuti U Fadhiya Hargeysa – somalilandtoday.com
Eedaymaha Loo Jeedinayo Dawladda Madaxweyne Geelle Oo Isasoo Taraya Iyo Mas’uuliyiin Ku Baaqay In 24-saacadood Gudahood Dalka Lagaga Saaro Wakiilka Jabuuti U Fadhiya Hargeysa
(SLT-Hargeysa) – Xoghayaha Arrimaha Gudaha ee xisbiga Mucaaridka ah ee UCID, Maxamuud Cali Saleeban (Ramaax), ayaa eedo u jeediyey dawladda Jabuuti, kaas oo sheegay in Jabuuti ay tahay cadowga Somaliland.
Sidoo kale Mr Ramaax waxa uu xukuumada Somaliland ugu baaqay inay mudo 24 saacadood ah gudahood ay dalka kaga saarto Safiirka dawlada Jabuuti u fadhiya Somaliland. “Waad ogtihiin xuduudku xageena wuu ka furan yahay oo way soo gali karaan, iyaga hal gaadhi oo aynu leenahay ma gali karo, habarta khudradda ku beertay halka 40Km u jirta magaalada Jabuuti kuma galin karto magaceeda iyada oo xuduuda Somaliland ka galinaysa. Dalka caynkaa inoola dhaqmaya, waxaanu leenahay xukuumada waajibaadkii ka saarnaa ilaalinta dadkeeda iyo dhaqaalaheeda may u saamixin, kalamanay hadlin, waxa ku haboon in cirka, dhulka iyo badda ka xidhno xabadda Kalluun ah ee Jabuuti laga cuno badda Somaliland ayaa laga qaadaa,” ayuu yidhi Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax).
Xisbiga Ucid oo kaliya kuma eeka dadka ama siyaasiyiinta Somaliland ee eedaha u jeedisay dawladda Jabuuti, waxa isna maalintii shalay warbaahinta kula hadlay hargeysa, xildhibaan Nacnac oo difaacay, isla markaana taageeray hadalkii guddoome Faysal Cali-waraabe ee ka dhanka ahaa dawladda Jabuuti. Xildhibaan Nacnac waxa uu sheegay in Jabuuti tahay cadawga koowaad ee jamhuuriyadda Somaliland. “jabuuti waa cadawgayaga koowaad, waxay innoo qabtaan ma jirto. Haddii maanta madaxweyne Muuse uu Innanta [Seedinimo] u qadarinayo iyo baasaboorkiisa, isagay jirtaa.
Xildhibaanku waxa uu soo jeediyay in dalka laga saaro wakiilka Jabuuti Hargeysa u fadhiya. “Haddii 24 saacadood gudahood dalka lagaga saari waayo, Wakiilka Hargeysa u fadhiya dawladda Jabuuti, waxbaanu ka qaban doonaa.” Ayuu yidhi Xildhibaan
Ilaa iyo hadda xukuumadda uu gadh-wadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi ayaan ka hadal, wax jawaab ahna ka bixin hadallada masuuliyiinta Somaliland ee eedaysay jabuuti iyo wakiilka Jabuuti ee fadhiya Hargeysa ay siweydaarsadeen